Ị nwere ike iche na-ekiri fim enweghị ihe ọ bụla music na niile? Music bụ mgbe ụfọdụ ihe na-eme a nkiri, ọ na-agbakwụnye niile pụrụ iche utịp na-mkpa aka kpọpụta ihe-eme ihe nkiri ike. Mgbe na-ekiri fim na mgbe ụfọdụ anyị adịghị aghọta nnọọ otú dị mkpa na soundtrack bụ n'ihi na anyị dị nnọọ na-atụ anya na ọ ga-ahụ. Ọ bụ ezie na composing egwú scores maka a film ọ dị iche iche karịa ede ọzọ music, e nwere ihe a dere kwesịrị iche banyere ya mgbe-arụ ọrụ na a fim nkiri soundtrack na ha agaghị asị na ha nọ dị nnọọ ede music. The music ga-aga na fim, ọ na-egosi na-ziri ezi mmetụta uche omume nke na-ege ntị na-ekiri ihe nkiri ahụ. A bụ ndepụta nke top 10 film music-arọ
John Williams a mụrụ ya na 8th February 1932 ma ọ bụ otu n'ime ndị kasị mma America si pianist, andiwet na-eduzi. O dere ọtụtụ film scores nke-anọgide na-ikwanye cinematic ụlọ ọrụ. Ya ọrụ na-agba na NBC Night News, Olympic Games dị nnọọ banyere ole na ole. O meriwo Golden Globe Awards, Grammy Awards, British Academy Awards na Academy Awards.
Raiders nke furu efu Art
Hans Zimmer bụ a German dere nakwa dị ka music emeputa ihe. Ya ọrụ na-agba na ihe karịrị 150 fim. O meriwo 3 Oge gboo BRIT Awards, Academy Award, 4 Grammy Awards na 2 Golden Globes. Ke ibuotikọ gwa site The Daily Telegraph, ọ na-na aha ya bụ dị ka otu n'ime n'elu 100 ndụ mmụta pụrụ iche. Ya ọrụ na-agba na-esonụ:
My Chemical Romance nke Caribbean
Enye akamana ke 29th May 1953 na-arụ ọrụ ka na-apụta dị iche iche na fim na telivishọn usoro. Danny Elfman bụkwa ihe omee, song-edemede na ndekọ na-emeputa. O meriwo Grammy Award na na-ahọrọ maka Academy Awards. O nwekwara ndibọhọ Richard Kirk Award. Ọ na-arụ ọrụ a na-agba na:
Ndị ikom na Black
Edward Scissor Aka
Alice na wonderland
James Horner a mụrụ ya na 14 August 1953 na a na-ewere ịbụ otu n'ime ndị kasị mma-arọ America nwere. O dere n'ihi na ihe karịrị 100 fim na meriwo 3 Saturn Awards, 2 Academy Awards, 3 Satellite Awards na 2 Golden Globe Awards. Ọ na-ahọrọ maka 3 British Academy Nkiri Awards. Ọ ọrụ na-agba na:
A Mara mma Mind
Bernard Hermann a mụrụ na 29th 1911 na-ewere dị ka otu n'ime ndị American ji mma andiwet karịsịa na ubi nke ngagharị ndịna. Ọ bụ maara nke ọma na ndị na-esonụ Hits. Ọ ndibọhọ Academy Award maka ọrụ ya.
The Day Ụwa guzoro
Emetụta akparamàgwà mmadụ
The Mọ na Oriakụ Muir
Howard Shore a maara nke ọma Canadian dere maka ọrụ ya na film scores. O dere n'ihi na ihe karịrị 80 fim. Ọ bagged 3 Academy enọ. Ọ na-arụ ọrụ e agba na fim dị ka:
Moonlight na Valentino
The gba ọtọ Lunch
Mkpụrụ obi nke ndị Ultimate Nation
7. Jerry-eji ọlaedo akpụ
Mụrụ 10th February 1929, Jerry-eji ọlaedo akpụ na-echeta ya dị ka onye nke kasị mma American-arọ maka telivishọn usoro na fim. Ụfọdụ n'ime awards o bagged agụnye Oscar, Grammy, British Academy Nkiri Awards na Golden Globe Awards. Ọrụ ya na-agụnye:
The mgbaàmà, nabatakwa
Star mee njem: The emana
Mụrụ na 10th November 1928, a Italian dere a na-ewere otu nke kasị mma n'ihi na ọ ekewet ruo ọtụtụ telivishọn usoro gụnyere ọtụtụ uku 500 ngagharị foto. Ya ọrụ na-apụta dị iche iche na inwe-emeri fim. Atụ ole na ole na-agụnye:
Aka na n'akpa uwe
Ezi ihe, Bad, jọrọ njọ
Igbu Bill Vol. 2
Daa ọdịda ihere Bastards
Ozugbo N'elu a Time na West
Elmer Bernstein a mụrụ na 4th April 1922 na-ekpe a ketara dị ka otu nke kasị mma American-arọ. O dere maka ọtụtụ telivishọn nwetara nakwa dị ka fim. Ọ bagged Oscar Award gụnyere abụọ Golden Globes na e ahọrọ maka Grammy Awards. Ọ na-maara nke ọma maka:
The Man na Golden Ogwe aka
N'ịbụ Modern Millie
Igbu a Mockingbird
Michael Giacchino bụ maara nke ọma American andiwet onye dere dị iche iche award emeri video egwuregwu, na fim nakwa dị ka telivishọn usoro. Ụfọdụ n'ime awards ya ka bagged agụnye Grammy, Emmy, Academy Award na Golden Globe Award.
Kpakpando mee njem n'ime Ọchịchịrị
Dawn nke Planet nke apes
Ọ bụ a European mụrụ na England na 1933. O ji nna ya cinemas site composing film music. O nwere ike na-enwe ike ịchịkwa ọtụtụ sinima igwe gụnyere ntule igbe na-enweghị mpụga help.Professionally, ọ bụ otu n'ime ndị English-arọ na-eduzi nke film music. Ya kasị mma arụ na-agụnye ụda tracks na James Bond si sinima nke bụ nnọọ pụrụ iche.
Ọ bụ ihe Australian na ghọrọ a akụkọ na mejupụtara nke oge gboo film music mgbe ọ kwagara America. Ọ malitere ọrụ ya na ya na nwata na mgbe e mesịrị debara aha na-amụ na Vienna Hochschule fuer Music und Darstellende Kunst ebe ọ nweela ihe ọmụma n'ọhịa. Na ọrụ ya, ọ mepụtara ọtụtụ oge gboo music, rhythms na-awụ ọsọ n'ugwu.
> Resource> Music> Top 10 Nkiri dere na ha Famous Oge gboo music